Abazali bafuna umnyango ungenelele eLaduma | News24
Abazali bafuna umnyango ungenelele eLaduma
ISIGUNGU esingamele isikole, i-school governing body (SGB), samabanga aphakeme iLaduma eKwaMpumuza kanye nabazali babafundi bakulesi sikole babenomhlangano ngeSonto, ngomhlaka 20 ku-Agasti, emuva kombhikisho wangoMsombuluko, ngomhlaka 14 ku-Agasti, wabafundi abekade bekhala ngokuthi abanaye uthisha wesifundo se-physics.
Ezinye izikhalo zabafundi bezimayelana nokungaphathwa kahle ibamba sekela likathishanhloko wesikole kanye nabanye othisha.
Abafundi babhikisha nje kukhona uthishanhloko osandokushiya isikhundla sakhe kulesi sikole ekhala ngokuthi abasebenzi ngokufanelekile othisha kanti ngokwembiko etholwe yileliphephandaba abafundi bancamela yena lothishanhloko oshiyile ngoba bethi ibamba sekela likathishanhloko elikhona alizithatheli phezulu izikhalo zabo.
Umhlangano we-SGB nabazali uphethe ngokuthi kumele kubhalwe incwadi ezothunyelwa kuNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal enezikhalo zabazali mayelana nokwenzeka kulesikole.
Lencwadi ebhalwe abazali ibikhala ngokuthi isikole asiphatheki kahle, othisha bangamaqembu ahlukene kanti futhi abafuni ukusebenza ngakho-ke abazali bafuni ukuthi umnyango ungenelele uzobheka isimo sakulesi sikole.
Leliphephandaba lithole ukuthi lencwadi ethunyelwe kuNgqongqoshe ibihambisana nencwadi ebhalwe uthishanhloko oshiye isikhundla sakhe kanye nephethe izikhalo zabafundi.
Emhlanganweni wangeSonto kuvele ukuthi uthisha wesifundo se-physics ozolekelela esikoleni ugcine etholakele kodwa kukhona abazali abakhale ngokuthi izingane zabo zithi azimuzwa kahle lothisha uma efundisa ngenxa yolimi alusebenzisayo njengoba eqhamuka esifundazweni sase-Eastern Cape.
Kulomhlangano kuphinde kwavela ukuthi sekube khona izigameko ezimbili zabantu abangena emagcekeni esikole bephethe izibhamu.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngenyanga ka-Mashi kuwona lonyaka kwadutshulwa owaye ibamba likathishanhloko kulesi sikole uNksz Priscilla Mchunu kanti namanje amaphoyisa asathungatha abasolwa njengoba kungaka boshwa muntu mayelana nalelicala.
UNksz Mchunu wadutshulwa phambi kwabafundi bakhe bakamatikuletsheni ngempelasonto ababelungiselela izivivinyo zabo.
Abazali bakhale ngokuthi izigameko zalolu hlobo zikhombisa ukuthi onogada ababekwe esikoleni abawenzi kahle umsebenzi wabo futhi abakwazi ukuvikela abafundi nothisha bakulesi sikole.
Okunye okuphinde kwavela kulomhlangano ukuthi onogada basesikoleni bebeshela izingane zesikole.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu. Kwazi Mthethwa uthe umnyango usunalo ulwazi ngokwenzeka kulesi sikole.
Uqhube ngokunxusa amalungu omphakathi anezikhalo ngezimo ezithinta ezemfundo ukuba bexhumana nezisebenzi noma nezikhulu zalomnyango kunothatha isinqumo sokuteleka.
Kuzokhumbuleka ukuthi eminyakeni emibili eyedlule uThishanhloko wasesikoleni samabanga aphansi iVilla Maria uNkk Nokthula Magwanyana wathola imibhalo efanayo akuphelanga sikhathi singakanani watholakala esebulwe, kanti kuze kube imanje abakatholakali ababulali bakhe.
Bombs discovered in Eastern Cape dam: Residents warned not to pick up unknown objects close to Strelizia Dam